ငွေသားအားကစားပြိုင်ပွဲ | Kerching ကာစီနို | သိုက်£ 10 £ 75 Play
နေအိမ် » Kerching ကာစီနိုမိုဘိုင်းငွေအားကစားပြိုင်ပွဲ | £ 500 အပိုဆုမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Kerching ကာစီနိုမှာငွေအားကစားပြိုင်ပွဲ Play | သင့်ရဲ့အပိုဆုနှစ်ဆတိုး
100% £ 500 အထိ
ငွေသားအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ Kerching ဖုန်းကာစီနို ငွေအနိုင်ရမည်ဟုစေရန်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Way ကို Are – တစ်ဦးကြီးမားသောကွိုဆိုအပိုဆု Get
မိုဘိုင်းငွေဂိမ်းရှယ်ယာမှာအမှန်တကယ်ချစ်ပ်နှင့်ငွေအတူကစားကြသည်လက်စွပ်ဂိမ်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်. ဂိမ်းကစားနေစဉ်အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်အချိန်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်, ကစားသမားသူတို့ရဲ့အလိုတော်မှာရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်ထွက်ခွာနိုင်. သို့သော်, ဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲများတွင်, တိကျတဲ့အချိန်ကန့်သတ်မရှိ. Kerching အခမဲ့ဆုကြေးငွေလည်းရွေးချယ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေကမ်းလှမ်းသည်.
Kerching မှာငွေအားကစားပြိုင်ပွဲ Play နှင့်လက်ရီးရဲလ်ငွေရယူနိုင်သော – ယခုဝင်မည်
ဖွင့ ်. ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်အထိ£ 50 နှင့်အတူပထမဦးစွာသိုက်ပွဲ. သင့်ရဲ့ဒုတိယသိုက်ကိုက်ညီ 100% အပိုဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်အတူတက်မှ£ 150. သင့်ရဲ့တတိယသိုက်တွင်, ကလိုက်ဖက်ရ 150% ဖွင့ ်. ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေအတွက်£ 300 အထိ!
ကစားတဲ့ပြင်သစ်တွင်အစပြုခဲ့. ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ကစားသမားတစ်ဦးအရေအတွက်သို့မဟုတ်နံပါတ်များတစ်အကွာအဝေးအလောင်းအစားစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်အရောင်အဆင်း၏အကွာအဝေးကနေအရောင်ရွေးနိုင်သည်, နံပါတ်တစ်ပင်သို့မဟုတ်ထူးဆန်းပါလျှင်သို့မဟုတ်ပင်လောင်းစေခြင်းငှါ. ထိုအခါတိုးတက်မှုနှုန်းဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်နေတဲ့အချို့သောညှနျကွားခအတွက်ဘီးလှည့်ဖျားခြင်းနှင့်ဘောလုံးကိုစေမည်. ဘောလုံးကိုနောက်ဆုံးမှာကုမ္ပဏီကြီးဘီးအတွင်းကိုဖန်ဆင်းသော slot နှစ်ခုသို့မြား. ထို့ကြောင့်, အနိုင်ရသူအရေအတွက်သို့မဟုတ်သူရွေးချယ်အရောင်ပေါ် မူတည်. ကြေငြာ. Kerching အခမဲ့အပိုဆုကစားတဲ့၏ဂိမ်းထဲမှာပူဇော်သော!
ဆန်းစစ်ခြင်းပေမယ့်ဒီလူကြိုက်ရေစီးကြောင်းဖုန်းကာစီနို Pay ကိုအားဖြင့်အထဲက Check ဆက်လက် ဘီလ် ကမ်းလှမ်းချက်များ
Blackjack ကစားသမားများနှင့်ကုန်သည်အကြားကစားနေသည်. ဒီဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကုန်းပတ်နှင့်အတူကစားသည် 52 ကတ်များ. အဆိုပါကစားသမားကိုအောက်ပါဖြစ်ရပ်များအတွက်ဆုရှင်အဖြစ်ကြေငြာ:
အဆိုပါကစားသမားဂိုးသွင်းသင့်တယ် 21 တစ်ဦးကုန်သည် Blackjack မပါဘဲမိမိလက်ကိုပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကတ်များအပေါ်အချက်များ.
ဖဲဝေအတိုင်းထက်အလွန်ပိုဆောင်းကတ်များဆှဲခဲ့လျှင် 21 မှတ်.
Kerching အခမဲ့အပိုဆုကစားသမားကမ်းလှမ်းနေသည် Kerching လောင်းကစားရုံအပေါ် Blackjack ကစားသူ.
ဒါဟာအစအလောင်းအစားကပါဝငျတဲ့လောင်းကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါလောင်းကစားသူသည်အခြားကစားဖော်တို့တွင်ဆုရှင်အဖြစ်ကြေငြာကြောင်းမိမိကိုမိမိထိုကဲ့သို့သောကစားသမားကဆုံးဖြတ်ရာထူးအပေါ် အခြေခံ. အခြားကစားဖော်နှင့်အတူပြု. ဒါဟာအစစံဖဲချပ်အဖြစ်လူသိများသည်. Kerching အခမဲ့ဆုကြေးငွေလည်း Poker အပေါ်ပူဇော်သော.
Kerching လောင်းကစားရုံသငျသညျအခမဲ့ဂိမ်းပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုကြိုးစားနိုင်ပါနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သင်သည်တတ်နိုင်ဘယ်မှာ Kerching အခမဲ့ဆုကြေးငွေ option ကိုအတူဂိမ်းကြိုးစားကြည့်ပါရန်သင့်အားကမ်းလှမ်း သိုက်ပိုက်ဆံသငျသညျရှယ်ယာရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံလုံလောက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအောင်မြင်သောအခါ. ဒီ Kerching လောင်းကစားရုံအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အခမဲ့ဆုကြေးငွေ Kerching သင့်မိုဘိုင်းအပေါ်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျထ boot မှကွန်ပျူတာများအတွက်စောင့်ဆိုင်းသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းစရာမလို. သင့်မိုဘိုင်း application ကိုသို့ Log, အခြစ်ရာကတ်ကိုသုံးပါနှင့်အခမဲ့ကစားစတင်ဖို့. Kerching မှာသိုလှောင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်သောကြောင့်, မှတ်ဉာဏ်၏သေးငယ်တဲ့ screen နဲ့ကန့်သတ်ငွေပမာဏ၏ဂိမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်သို့သော်ကန့်သတ်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်.
ငွေသားဂိမ်းထဲမှာ, ပိုက်ဆံကစားသမားများကချစ်ပ်များအတွက်ဖလှယ်နှင့်တစ်ဦးန့်အသတ်အချစ်ပ်ကိုဝယ်ယူရန်အများအားဖြင့်ရှိသည်. ပြိုင်ပွဲဂိမ်းထဲမှာပိုက်ဆံ၏တူညီသောပမာဏကိုမည်သည့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲချစ်ပ်များအတွက်ဖလှယ်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းအဆိုပါအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်ဆုံးကန့်သတ်ထားပြီးသတ်မှတ်ထားကြသည်.
ငွေသားဂိမ်းကစားသမားသူတို့ဆန္ဒရှိအချိန်မရွေးဖြတ်နဲ့ Hard သို့မဟုတ်အအေးငွေသားများအတွက်ချစ်ပ်ဖလှယ်ဖို့ခွင့်ပြု. သို့သော်, အနိုင်ရသူအဖြစ်ကြေညာသည်တဲ့အခါမှသာပြိုင်ပွဲဂိမ်းအဆုံးသတ်. တစ်ဦးကအနိုင်ရသူအပေါင်းတို့ကိုချစ်ပ်သူတစျဦးဖွစျသညျ.
ငွေသား Kerching အခမဲ့နှင့်အတူဂိမ်းကစား ဆုငှေ, အဆိုပါပြိုင်ပွဲဂိမ်းအတွက်မျက်စိကန်းနေတဲ့အချို့သောအချိန်ကြားကာလအတွင်းအခါတိုင်းတိုးမြှင့်သော်လည်းမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်တူညီရှိနေဆဲ.
သင်ငွေသားဂိမ်းထဲမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ချစ်ပ် / ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့လျှင်, သငျသညျကိုဝယ်-In နိုင်ပါတယ်နောက်တဖန်. သို့သော်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းထဲမှာသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ငွေကို / ချစ်ပ်ကိုဆုံးရှုံးလျှင်, ထို့နောက်သင်တစ်ဦးအရှုံးသမားအဖြစ်ကြေညာခြင်းနှင့်သင်ဂိမ်းထဲကဖြစ်ကြ၏.
ဒါဟာအမြဲတမ်းပြိုင်ပွဲဂိမ်းကစားမီကငွေသားဂိမ်းကစားရန်အကြံပြုသည်. သငျသညျငွေသားဂိမ်းကစားပြီးပြီ, သင်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းကစားရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုနှင့်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီ. သို့သော်, ကကစားသမားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုဖြစ်ပါတယ်, ငွေဂိမ်းနဲ့စတင်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်ရှိမရှိ.
အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောကစားသမားတွေကစားရန် Kerching အခမဲ့ဆုကြေးငွေ၏စက်ရုံ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေဂိမ်းအနိုင်ရနိုင်.
နောက်ထပ်ဂရိတ်မိုဘိုင်း View ဖုန်းကိုကာစီနိုကမ်းလှမ်းချက်များ!